कला / शैली Archives - Page 19 of 21 - Safal Awaj Safal Awaj
नेपाल आइडल सिजन–३ को उपाधि सज्जा चौलागाईंलाई,
काठमाडौं, भदौ १२। मोरङकी सज्जा चौलागाई नेपाल आइडल सिजन–३ को विजेता घोषित भएकी छन् । भोट र निर्णायकको मूल्यांकन आधारमा अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापाले शुक्रबार राती टेलिभिजनबाट आइडलको विजेता घोषणा गरेका हुन्। प्रतियोगितामा प्रवीण बेडवाल र किरणकुमार भुजेल क्रमशः फस्ट रनरअप र सेकेण्ड रनरअप घोषित भए । विजेता सज्जा चौलागाईंले ५० लाख रुपैयाँ, फस्ट रनरअपले १० लाख र सेकेन्ड रनरअपले ५ लाख नगद प्राप्त गरेका छन् । ग्राण्ड फिनाले चलिरहेकाेे अवस्थामा आयाेजक टिम मध्येका एक सदस्यलाई काेेराेना… पुरा पढौ
“चिया मीठो छ” भन्दै आए सुरेन्द्र
पोखरा, भदौ १२ । विगत डेढ दशकदेखि नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा गितकार, गायक तथा मोडलिङबाट सक्रिय सुरेन्द्र लामिछानेले नयाँ शैलीको गित “पानी छल्काले” मार्फत चिया मीठो छ भन्दै आएका छन् । अहिले चर्चाको शिखरमा रहेकी गायिका समिक्षा अधिकारी र गायक प्रसाद लामिछानेको स्वरमा सजिएको गीत सुरेन्द्र आँफैले लेखेका हुन । नायिका नम्रता सापकोटा, सुरेन्द्र लामिछाने, प्रल्हाद सुवेदीको अभिनय रहेको उक्त गितमा प्रसाद लामिछानेको संगीत, अजय रेग्मीको छायांकन, प्रविण भट्टको सम्पादन र कुमार केसीको निर्देशन रहेको छ । आफुले निर्देशन गरेका धेरै… पुरा पढौ
मन्त्र ब्याण्डको नयाँ गीत ‘माया’ बजारमा
पोखरा, ६ भाद्र। गीत संगीतको उन्नयनको‌ लागि धेरै कलाकार कति ब्यक्तिगत रुपमा त कति ब्याण्डमा आबद्ध भएर लाग्नु भएको छ । यस्तै ब्याण्डमा आवद्ध भई रक शैलीको गीत संगीतद्वारा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ख्याती कमाएको नेपाली गीत संगीतकै एक अब्बल ब्याण्ड हो मन्त्र । श्रोता तथा दर्शकको मनोभावनालाई हृदयगम गरी बेला बेलामा नयाँ नयाँ गीत प्रस्तुत गर्दै आएको‌ यस ब्याण्डकाे नयाँ गीत 'माया' मन्त्र अफिसियल युट्युब च्यानलबाट आज रिलिज भएको छ । ब्याण्डकै स्वर संगीत रहेको यस गीतको रचना सुरेश… पुरा पढौ
विष्णु गिरीको पहिलो आधुनिक गीत ‘माया मारी गयौ…’
‘सयौं डाँडा काटी गयौ, सात समुद्र पारी गयौशुन्य पारी गाउँघर, तिम्ले माया मारी गयौ’गुल्मीका विष्णुकुमार गिरी आफैं सयौं डाँडा काटेर सात समुद्र पारी जापान पुगे । अनि गाउँघर शुन्य पारेर माया मार्नेहरुको कथा गीतमा लेखे । गिरीको यही गीत बिबी अनुरागीको संगीत र शिशिर योगीको आवाजमा हालै सार्वजनिक आएको छ । गिरी १२ वर्षअघि जापान पुगेका हुन् । जापानमा नेपाली स्वादको रेष्टुरेन्ट व्यवसायमा उनी व्यस्त छन् । यही व्यस्तताका बीच उनी आफ्ना भावना बेला बेला कलममार्फत् पोख्ने गर्छन् । उनले… पुरा पढौ
‘सालको पातको टपरी’ लाई सर्वाधिक भ्यूज
लोकदोहोरी गीत ‘सालको पातको टपरी’ युट्युबमा सार्वजनिक भएको आउँदो साता २३ महिना पुग्दैछ । यस बीचमा गीतको म्युजिक भिडियोले युट्युबमा ६ करोड २१ लाख बढी ‘भ्यूज’ बटुलेको छ । सालको पातले पाएको भ्यूज लोकदोहोरी गीतमा हालसम्मकै सर्वाधिक रहेको बताइएको छ । सार्वजनिक भएको छोटो अवधिमा धेरै हेरिएको लोकदोहोरीमा उक्त गीत दर्ज भएको थियो । चार महिना नबित्दै युट्युबमा २ करोड भ्यूज नाघेको थियो । गीतमा कुलेन्द्र विश्वकर्मा र विष्णु माझीको मीठो स्वर भरेका छन् । युवा पुस्ताका गीतकार नवराज पन्तको… पुरा पढौ
नेपाललाई एकै दिनमा १७ विधामा १० फरक विश्व रेकर्ड
काठमाडौं २५ साउन , नेपाली गीत सँगीतबाट फेरी एउटा ईतिहाँस कायम भएको छ । यो इतिहाँस नेपालका लागि मात्र नभएर विश्वका लागि गीतकार डा. डि आर उपाध्यायले कायम गरेका छन् ।१२ अन्तराष्ट्रिय भाषामा १२ लाईनको गीत रेकर्ड गराएर गत महिना मात्र गिजिन अफ वल्र्ड रेकर्ड राखेका गीतकार डा. उपाध्यायले यतीबेला फेरी १७ फरक विधामा विश्व किर्तिमानी कायम गरेका छन् । यो नेपालकै लागि गौरवको कुरा हो । आईतबार राजधानीमा एक समारोहबीच सामाजिक दुरी कायम गर्दै डा. उपाध्यायलाई श्रम तथा रोजगार… पुरा पढौ
दिलिप रेग्मीको शब्द तथा लय सिर्जनामा देउरानी जेठानी
काठमान्डौ । नेपाली नारीहरुको महान पर्व हरितालिका तिजको अवसरमा लोक सष्टा तथा सर्जक हरुको सिर्जनाहरु बजारमा आइरहेका छन । गायिका जानकी कुबँरको आवाजमा रहेको बर्तमान परिवेशलाई आधारित रहेर तयार पारिएको ”देउरानी जेठानी ” गीतको भिडियो डिजिटल बजारमा सार्वजनिक भएको छ । विश्व व्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोनाको कारणले माइत जान नपाएका चेलीहरुको पिडालाई गीतमा समेटिएको छ । गीतमा मन भित्रको पिडालाई निकै मार्मिक रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । दिलिप रेग्मीको शब्द तथा लय सिर्जना गीतमा रहेको छ । ”देउरानी जेठानी… पुरा पढौ
गायिका विष्णु परियारको तिज गीत पारीको संगी सार्वजनिक
काठमान्डाै । नारीको पिर र वेदना समेटिएको गायक कुशल विश्वकर्मा र गायिका विष्णु परियारको आवाजमा रहेको तिज गीत पारीको संगी सार्वजनिक भएको छ । तिजको वेलमा आपसमा दिदि बहिनीहरु भेला भएर बर्ष भरीको पिडालाई आपसमा रमाइलो तरिकाबाट साटासाट गर्ने परम्परा रहेको छ । शक्ति क्षेत्रीको शब्द तथा कुशल विश्वकर्माको लय सिर्जना गीतमा छ । ”पारीको संगी” गीतमा मौलिक शब्द र ग्रामिण परिवेशको आधारमा तयार पारिएकोले पनी आम दर्शक तथा स्रोताले मन पराउनेमा आफु आशावादी रहेको गीतको प्रस्तुतकर्ता सुस्मिता क्षेत्रीले बताइन… पुरा पढौ
वाइवाइ नेपाल स्टारको डिजिटल राउण्ड प्रसारणको तयारीमा
नेपाली मौलिक सिङ्गिङ रियालिटी शो वाइवाइ नेपाल स्टारको डिजिटल माध्यमबाट तयार पारिएको दोस्रो राउण्ड सम्पन्न हुने तयारीमा छ । दोस्रो राउण्डको चारमध्ये चारै एपिसोडको छायाङ्कन सकिएको छ । तीन एपिसोड प्रसारण भइसकेका छन् । देशका सातै प्रदेशमा सम्पन्न अडिशनबाट छानिएका १२० प्रतिस्पर्धीमध्ये ११७ जनाले दोस्रो राउण्डमा आफ्नो सहभागिता जनाएका थिए । विभिन्न प्राविधिक कारणले बाँकी तीन जनाले भने यो राउण्डमा आफु सहभागी हुन नपाएको बताएका छन । प्रसारित तीन एपिसोडबाट ३४ जना तेस्रो राउण्डको लागि छानिएका छन् भने अब डिजिटल… पुरा पढौ
पूर्ण र मेलिनाको गीतमा दयाहाङकाे अभिनय
काठमाडौँ २१ साउन, कोरोनाका कारण नेपाली चलचित्र क्षेत्र चार महिनादेखि ठप्प छ । चलचित्र क्षेत्र ठप्प रहेपनि म्युजिक भिडियोको छायाँकन भईरहेको छ । चलचित्रमा चलेका केही कलाकारहरु म्युजिक भिडियोमा व्यस्त देखिएका छन । लकडाउन खुकुलो भएसंगै अभिनेता दयाहाङ राईले केही म्युजिक भिडियोमा काम गरिसकेका छन् । उनी अभिनित अर्को म्युजिक भिडियो आइतवार गोदावरीमा छायांकन सम्पन्न भएको छ । गायक पूर्ण लिम्बु र मेलिना राईको स्वरमा रहेको गीतमा दयाहाङ र रेबिका गुरुङ फिचर छन्। मिलन चाम्सको निर्देशनमा बनेको भिडियोलाई सुदिप बरालले… पुरा पढौ